1050 Deep Drawn Tapa-koditra Aluminium Circular Plate High Tensile Tension - Zhejiang Shuanglin Jiate Metal Technology Co., Ltd
Ny kofehy alim-bary 1050 novokarin'i Shuanglin Jiate dia naparitaka tamin'ny alàlan'ny CC & DC aluminium aluminium, ny hateviny arakaraky ny 0.25mm ka hatramin'ny 6mm, ny diamondra avy 50mm ka hatramin'ny 1200mm, ny laharana rehetra 1050, 1060, 1100, 3003, 3004, 3105, 5052 temper H14, H24, H16 amin'ny H18, O, sns. Aluminium 1060 aluminio dia ampiasaina amin'ny dingan'ny fihodinana, spinning, sns., Dia afaka mamokatra vokatra toy ny fitaovana elektronika, fitaovana elektrika, lakolosy fanjelanjelatra LED.
Inona ny endriky ny ala 1050 amin'ny alim-borona?
Aoka ho afaka amin'ny alikaola, dendrina, fampidiran-doko, scratches, tain-koditra, fanodinana oksidia, fialana, korrosion, marika fingotra, dona marefo ary kilemaina hafa izay hanelingelina ny fampiasana azy. 1050 alim-borona ny ala tsy misy loko mainty, mofomamy madinidra, paikady mahazatra, fanodidinan'ny milina fanodikodinana, toy ny gko interne Control hafa.
Manana fitaovana lehibe maro izahay, fantsom-pamokarana tsy tapaka sy milina milina, milina milina mafana, kofehy miloko mangatsiaka, milina fanodinana rindran-damina, famolavolana milina famokarana marika, tsipika famokarana teteza, tselatra, fanasitranana fandroana, milina fanodina. Miaraka amin'ny rafitra fitaovana avo lenta sy mafy orina, afaka manome toky ny vokatra sy ny fotoana fohy.
Mitadiava mpamorona sy mpamatsy mpamorona 1050 tsara indrindra? Manana safidy maro izahay amin'ny vidiny lehibe mba hanampiana anareo hahazo famoronana. Ny DC Aluminum Circle dia mari-boninahitra azo antoka. Izahay dia orinasa orinasa Shinoa avy amin'ny aliminioma ho an'ny pans. Raha manana fanontaniana ianao, tsidiho azafady mba hifandraisana aminay.
5052 Aluminum Circle, kodiarana alim-borona